I. ကuိယ်ဝန်ဆေ&င:&လ ည့်ကiရiယ&
IV. ဘေ#ကင်းသေ& အစPအမJတစ4uဖ1SP#ခြင်း
သင် ကuိယ်ဝန်ဆေ&ငi&#သYIX& မYIX3 ကြာပြီနP်း။ သuတေသန ပြုလuပ43ကI3ားအရ သင် နေ&ကf<ုး ရ&သ>လ&ခသEh ည့်က&လမX ၁၀ ပတIတuိငI> ဆေ#ဝO#ဖြင့် ကuိယ်ဝ123က43ခြင်းကuိ အသ<ုးပြုရန် အကြ<ပြုထ&#ပOသည်။ နေ&ကf<ုးရ&သ>လ&ခEhခ3ိ1cတည်းက ယခuအခ3ိ1ii ရက်ပေOင်းမP@◌ျှကြ&ပြ>ကuိ ဆ<ုးဖြတqန် ကuိယ်ဝန်ဆေ&င&c လ Mတက43က;ည့်ကiရiယ&ကuိ အသ<ုးပြုပO။
သ&#အiမiEMတင် သေန္ဓတ&#ပစ္စည်း ထည့်ထ&#လX3င် (ဥပမ&- Xကိ◌ုင် IUD သuိ့မဟuတ် ပZuိဂ3ကdတ>Zuန်း IUD) ၎င်းကuိ ဖယqX&#ရမည်။ ကuိယ်ဝ123က43ဆေ#ကuိ eမသ&ကI> IUD ကuိ ဖယqX&#ရမည်။
သင;ည် HIV ပuိးZXiသkဖြစAX3င် ပuိ၍ ဖ3ားန&ခြင်း မLဖစ်စေရန်၊ ဗiuင်းရပdiiန်းချုပ်ဆေ#မ3ားကuိ သေ&က;<ုးရရ3်◌နှင့် သင်၏ က3န်းမ&ရေ# ကေ&င်းWမန်စေရန် ဂZuစuိကNO။
ကuိယ်ဝ123က43သYcuိ အတတ်◌န◌- ◌ိငf<ုး မY;kမX3 မသiစေလuိပOက မiန်းမကuိယiE ထည့်မည့်အစ&# ဆေ#ကuိ သင်၏ `သား◌န◌င့် ပO#သေ&ငaကြ&# ပO#စပiE ထည့်ထ&#ပO။
eကလ#ကuိ ◌န◌- ◌ိ့တuိက်ေsက3#နေသk ဖြစAX3င် မ>ဆuိပZuိeစတ&လ် ဆေ#က eကလ#ငယcuိ ဝမ်းပ3က်ဝမ်းလေX3ာ ဖြစ်စေန◌- ◌ိငNOသည်။ ယင်းသuိ့ မLဖWစN&#စေရန် eကလ#ကuိ ◌န◌- ◌ိ့အရငုZ◌ိက\_ါ။ ပြီးမှ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ်ဆေ#ကuိ သေ&ကNO။ နေ&ကiပ် ၄ န&ရြ> က&ပြ>#မX eကလ#ကuိ ◌န◌- ◌ိ့တ- ◌ိက\_ါ။
သင့်Mတင်ေMသ#အ&#နည်းရေ&ဂO (ေMသ#ထEMတင် သ#ဆ<ုး မiနစ် ၃၀ အMတင်း သင့်အ&#ကkည>ပေး◌န◌- ◌ိငIည့် က3န်းမ&ရေ#စေ&င့်ေZX&က@ှုေ◌ပ#သk တစ်ဥ>#ကiuေWရ#ခ3ယi&#ပO။ သင့်eအ1Lဖင့် အMလန့်အMလန်ေMသ#အ&#နည်းနေပOက ကiuယ်ဝ123က43ဆေ#မ3ား မသ<ုးCစEမ> ဆရ&ဝ1စK်ဦး◌န◌ှင့်ေ*ဆးေ◌နွ◌း တiuငNငNO။
ကuိယ်ဝ123က43သည့် ဖြစdဥKeလX3ာကA<ုးMတင် ရေမ3ားမ3ား သေ&ကNO
ပေKLပေKLပK#ပK# အစ&#အစ&မ3ားကuိ စ&#ပK (ဥပမ&- ခရကc&မ3ား သuိ့မဟuတ် ပေOငIuန့်မ>#ကငI3ားက ပျိ◌ု့အ143ငdiတcuိြေeဖလ3ာ့ပေး◌န◌-ိငNOသည်)
သင့်ကuိ စေ&င့်ေZX&က်ပေး◌န◌- ◌ိငIည့် သkတစ်ဥ># ဘေ#န&#Mတင် ZXiပOက အကkအည> ဖြစ်စေန◌- ◌ိငNOသည်။
ဗuိက်အေ&င့်ခြင်းမX သက;&စေရန် မ>ဆiuပရ◌-ိeစတ&ကiu အသ<ုးမLပုမ> အiuငHIပရ◌%ိဖန် အ&# အသ<ုးပြုသင့်သည်။
eအရ#ပေေါ်ဆ#ကuသမှုအကkအည>လiuအပA&ခEhလX3င် ကiuယ်ဝ123က43ဆေ#မ3ား မသJုးNစOမP ဘေ#ကင်းသေ&အစPအမJတစu4 ထ&#ZXiပO။
eအမရiကန်ပြည်ထေ&ငdu သ&#Wဖ&#မ>#ယပaသင်းအCဖ့E ချုပ် (American Congress of Obstetricians and Gynecologists) ၏ အဆiuအရ၊ ကuိယ်ဝန်ဆေ&င;ည့် ပထeမလ#လပMတKင် ဆေ#ပည&ဖြင့် ကiuယ်ဝ123က43ခြင်းသည် ဘေ#အကင်းဆ<ုးဆေ#ပည&ဆiuငq& လuပi<ုးလuပxည်းမ3ား ထEမX တစ4uဖြစ;ည်။ သ့iuေ◌သ&် သင့်eအ1Lဖင့် ဖြစာb န◌-ိင;မX3 ဆေ#ကuသမှုဆuိငq& eအရ#ပေါ် eအခြeအနအMတက် ကြိ◌ုတင်◌ပြငငcာdးသင်◌့ ပါသP်။ လuိအပNOက သင်၏ဘေ#ကင်းသေ& အစ>အမ< ရေ#sဆEရ&Mတင် အကkအည>ပေ#ရန် က*ျန◌်◌- ပKiu့၏မေ#Wခန်းမ3ားကiu ထည့်Mသင်းစဉ်းစ&#ပO။
အနP#ဆJုး ၂၄ န&ရP eအရ#ပေေါ်ဆ#ကueသရ#ဌ&နသည် မW>ည့်နေရ&
ယင်းနေရ&သ့iu ၁ န&ရ>ထက်နေ&ကIက3ပE ရေ&ကqXiရနAuိအပNOသည်။ (သင့်Mတင်ေMသ#အ&#နည်းရေ&ဂOZXiလX3င် ထuိနေရ&သuိ့ မiနစ် ၃၀ အMတင်း ရေ&ကqXiသင့်ပOသည်။)
သင့်1Xင့်အတkသင့်ကiuက&#မေ&င်း၍လiuကNiu့ေ◌ပ#မည့်သk ZXiပOသလ&#။ အငX&#ယ&ဉ် စ>#နင်းမလ&#။ ဘတdc&#လ&#။ ကu1c3စရiတIညIX3ZXiပြ># ၂၄ န&ရ> Wဖင့်ပOသလ&#။ ဆေ#ကuသမှုအMတက် eအရ#ပေါ်eအခြeအနMတင် ဆေ#ရ◌ံ ◌- သ့iu သငciuယKiuငc&#မေ&င်းMသ&#ခြင်း သည် အန◌္တရ&ယFိန◌ှ -ိငNOသည်။
သင်နေထiuင်သေ&နေရ&Mတင် ဆေ#ပည&ဖြင့် ကiuယ်ဝ123က43ခြင်း သiu့မဟuတ် အiWမKင် ကuိယ်ဝ123က43ခြင်းအ&# တရ&#ဝငcန့်သတi&# ပOသလ&#။ သင့်ကiuယ်ရေ#ကiuယK&ကiuအက&အMကယ်ပေ#ပြ># လiuအပ်သေ& အကkအည>အ&# သင့်ဆရ&ဝ1I3ား န&#လည်အေ&င် မY;uိ့ ပြေ&မYxည်း။ ပြေ&ဆiuရ&Mတင် အကkအည>ဖြစ်စေရန် *က◌ျန◌်◌- ပKuိ့Mတင် အကြ
What To Tell Your Doctors?
ဆရ&ဝ1F3ားကiu ဘယ\_iuပြေ&မလO ◌နiင^လuိအပNOက သင်ပြေ&ဆiuရမည့် eအကြ&င်းအရာန◌ှင့်ပတ;က်ပြ># သတiZXiရန် လuိအပNOမည်။ ဆေ#ပည&ဖြင့်ကiuယ်ဝ123က43ခြင်းMတင် သဘ&ဝeအလ3ာက် ကiuယ်ဝ1N3ကc3ခြင်း (အလiueအလ3ာကciuယ်ဝ1N3က်ခြင်း) ◌နှင့် အတiအက3တkည>သေ& လက္ခဏ&ရပI3ား ZXiပOသည်။ ထuိ့ေ◌ကြ&င့် အေ&ကNOတiu့အတuိင်း သင် ပြေ&ဆ- ◌ိန◌- ◌ိငNOသည်-
ဘ&ဖြစAEဆiuတ& eမသခ3ာပOဘk#။ေMသ#ေMတစဆင်းလ&တယ်။
ေMသ#ဆင်းနေတယ်၊ ဒOပေမယ့် ပ<ုမXန်}ာသ>လ&တEhပ<ုစ<တေ&hမဟuတ~S#။
ရုတKရက်ေMသ#ေMတဆင်းလ&တ&။ တစ4uခuတေ&h ဖြစ်နေပြ>ဆuိပြ># ထiတAန့်Mသ&#တယ်။